Hunhu kutarisa kwePVC yakavezwa 3d yakasungwa waya mesh pani
Hunhu kutarisa kwePVC yakavezwa 3d yakasungwa waya mesh yepaneru Saizi uye waya dhayamita kuongororwa kwetambo mesh fenzi: Wire dhayamita: 5.3mm Hole: 60x200mm Saizi: 2000x2440mm Mhedzisiro: anokwanisa. ...
Ainge atumirwa: 20 Metric tani kwakakurudzira simbi nesefa akagadzirira vachizvitakudza uye nerubatsiro yomunzvimbo chirongwa mu China
Shipment musi wa28, Chikumi: 20 Metric tani yesimbi kwakakurudzira nesefa yakagadzirira kurodha uye kupa Chigadzirwa: Simbi nesefa Saizi: Cheka kuumba, ine inosunga bhaa. saizi dzakasiyana. Pamusoro: Kupisa kwakakurudzira chimiro: pakutakura kwekutakura Chinangwa: yekushandisa chikuva nzira. ...
PaSiza Kutarisa Pashure Pedu Simbi Grating Kununurwa Kuisa
Zuva rapfuura zuro, zvigadzirwa zvesimbi zviye zvave kurodha murori uye zvinotanga idare rekusangana nemuridzi wayo. Chigadzirwa: Simbi pamusoro pevhu: Hot dip kwakakurudzira Specification: dzakasiyana huwandu: 780 metric matani Project: Zvemaindasitiri kuvaka ...
Chinyorwa chinotenderera simbi nesefa ye 30x3mm bani bhara mhando kurodha pane 40GP mudziyo chikepe kuenda Algeria 2021/6/10
Chinyorwa chinotenderera simbi simbi ye30x3mm yakajeka bar mhando yekukanda pane 40GP mudziyo chikepe kuenda kuAlgeria 2021/6/10 Inoenderera kubva nezuro, yechipiri mudziyo we40GP yakatakurwa mumudziyo nhasi uye wotanga iko kutumira kusangana nemuridzi wayo. Product: simbi nesefa Type: pachena simbi ...
Electro ndokugadzira Welding simbi neseya isina simbi kurodha mumudziyo uye kutumira kuAlgeria 2021/6/9
Electro Ndokugadzira Welding simbi nesefa isina simbi kurodha mumudziyo uye kutumira kuAlgeria 2021/6/9 Chekutanga mudziyo weodha kubva kumutengi weAlgeria yezvigadzirwa zvesimbi zvigadzirwa zviri kurongedza mumudziyo izvozvi. Ndokumbira utarise nezve kutumirwa kwemutengi ...
Chengetedza Peter Cottontail kure neyadhi yako uye gadheni
Nehurombo, tsuro hazviwanzo kuenda pakuramwa nzara, uye gadheni redu remaruva, gadheni remuriwo nenzvimbo zvinokupa iwe mutsva uye unonaka miriwo yakasanganiswa. Munguva yechando, mushure mekunge matavi asina chinhu atetepa, tsuro ine nzara yezvose zvinopihwa nebindu redu. H ...
China PPI: Mugadziri wemutengo Index - Raw materail
Zvinoenderana neyazvino dhata yakaburitswa neNational Bureau ye Statistics, Muna Kurume 2021, iyo fekitori yenyika mutengo wevanogadzira maindasitiri (PPI) yakawedzera ne1.6% mwedzi-ne-mwedzi, inova iyo yakanyanya kukosha kubva pamwedzi-pa-mwedzi data (2002 kupa); Muna Kurume, iyo PPI yakakwira 4.4% gore-pa-e ...
FRP nesefa katarogu: rakaumbwa mhando, rakabvaruka mhando, rakarongedzwa pamusoro mhando, frp nesefa ine butiro yeplate mhando uye uremu runyorwa rwe fiberglass frp nesefa Fiberglass nesefa ine hombe kutakura-inokwana chinzvimbo, uye kwayo yakasimba uye kukotama simba kuri pamusoro pe600Mpa. Kuneta kurwisa ingangoita makumi mashanu nguva yeiyo s ...
Chii chandinofanira kuita mushure mekunge ndanyatsojekerwa ne COVID-19?
Kunyangwe vazhinji vedu takamirira neshungu zuva ratinogona kuronga musangano wekubaya jekiseni re COVID-19, zuva iri rinogona kutanga kupfuura zvaunofunga. Gavhuna Gavin Newsom (Gavin Newsom) vakati kutanga muna Kubvumbi 15th, vese veCalifornians vane makore gumi nematanhatu zvichikwira vanogona kuita musangano we COVID ...
Chishanu, Kukadzi 26, 2021 ndiwo Mutambo weRenje kune vese maChinese. Iwo mutambo unofadza. Kunyanya husiku hunonakidza. Pazuva rino, vanhu vanorembedza mwenje, voisa chirahwe pasi payo. Ipapo kunouya mutambo: fungidzira chirahwe! Uyo anofungidzira chirahwe kurudyi acha ...
Simbi Yakagadzirwa Nhumbi Mutengo Ramba Uchiwedzera
Kubva kutanga kwegore rino, mbishi zvinhu zvakaita sehuni, chipanje, zvemakemikari zvekunamira, simbi dzisiri feri, uye kunyange makatoni ari kuramba achikwira, uye mitengo yezvimwe zvikamu yakatowedzera zvakapetwa kaviri. Semuenzaniso, isina-feri simbi yakakwira neinenge 50%, uye yakapfava furo poly-ether, yakakosha ...
Steel Grating, FRP nesefa, Welded Iron Fence Factory
Hebei Weijia MetalMesh Co, Ltd ndeye kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yepamusorosoro mabhizinesi. Isu tiri simbi mesh wekutanga kufambisa muChina. Tine mukana wekukwikwidzana mumhando dzakasiyana dzefenzi, senge, jeri fenzi, nhandare yendege, njanji fenzi, yekuzviparadzanisa fenzi; simbi g ...
Quality cheki kuti PVC zvemapuranga 3d welded WI ...
Ainge atumirwa: 20 Metric tani of kwakakurudzira ste ...
PaSiza Kutarisa Pashure Pedu Simbi Yese Grating ...
Chinyorwa Welding simbi nesefa pamusoro 30x3mm pl ...
Electro yakabva yanyatsobatana nomoto simbi nesefa pachena ...